Hoosudhaca weyn ee taraafikada rakaabka ayaa kusii socda garoonka diyaaradaha Frankfurt bishii Nofeembar 2020
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airport » Hoosudhaca weyn ee taraafikada rakaabka ayaa kusii socda garoonka diyaaradaha Frankfurt bishii Nofeembar 2020
Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Jarmalka Jebinta Wararka • News • Ogeysiisyada Saxaafadda • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
In November 2020, Madaarka Frankfurt (FRA) u adeegtay 656,420 rakaab ah, taas oo ka dhigan hoos u dhac boqolkiiba 87.0 ah marka loo eego isla bishii la soo dhaafay. Isugeynta taraafikada ee FRA inta lagu gudajiray bilaha Janaayo-Nofeembar 2020 waxay hoos udhigtay boqolkiiba 72.8. Horumarkaan waxaa loo aaneyn karaa xayiraadaha safarka ee adag ee socda iyadoo uu socdo fiditaanka cudurka 'Covid-19'. Taa bedelkeeda, soo dejinta xamuulka 'FRA' (airfreight + airmail) ayaa koray bishii labaad ee isku xigta - iyadoo kor u kacday boqolkiiba 4.3 sanadkii ilaa sanadkii 194,619 metrik ton bishii Nofeembar 2020.
Dhaqdhaqaaqa diyaaradaha ayaa hoos u dhacay 67.0 boqolkiiba 12,803 duullimaad iyo soo degitaan bishii warbixinta, halka culeysyada ugu badan ee qaadista (MTOWs) ay qandaraas ku qaadatay boqolkiiba 57.1 illaa qaar ka mid ah 1.0 milyan metrik ton.
Kooxda oo dhan, garoomada diyaaradaha ee ku yaal faylalka caalamiga ah ee Fraport waxay sii wadeen inay soo sheegaan waxqabadka taraafikada ee kaladuwan Noofambar 2020 - iyadoo kuxiran xaaladda masiibada ee dalkooda ama gobolkooda. Gudaha Slovenia, taraafikada Madaarka Ljubljana (LJU) ayaa hoos u dhacay 95.0 boqolkiiba sanadkii ilaa sanadka 4,258 rakaab ah. Garoomada diyaaradaha ee Fortaleza (FOR) iyo Porto Alegre (POA), marka la isku daro, waxay arkeen hoos u dhaca taraafikada 48.7 boqolkiiba wadarta guud ee rakaabka 675,602. Gegada Diyaaradaha Lima ee dalka Peru (LIM) waxay diiwaan galisay boqolkiiba 72.8 qulqulka taraafikada 532,522 rakaab ah.
14-ka garoon diyaaradeed ee gobolka Giriigga, isku-darka taraafikada ayaa hoos ugu dhacay 84.3 boqolkiiba 114,158 rakaab ah bishii Nofeembar 2020. Xeebta Badda Madow Bulgaariya, garoomada diyaaradaha Twin Star ee Burgas (BOJ) iyo Varna (VAR) waxay soo dhoweeyeen wadar dhan 23,765 rakaab ah, hoos ayey u dhacday 71.6 boqolkiiba sanadka-sanadka.
Gadiidka garoonka diyaaradaha Antalya (AYT) ee Turkiga ayaa hoos udhacay 61.7 boqolkiiba sanadkiiba ilaa 521,610 rakaab ah bishii warbixinta. Madaarka Pulkovo (LED) ee ku yaal magaalada St. Petersburg ee dalka Ruushka ayaa diiwaangeliyey hoos u dhac boqolkiiba 40.2 ah oo ku yimid rakaab dhan 821,409. Shiinaha, Madaarka Xi'an (XIY) wuxuu qaabilay kudhowaad 2.4 milyan oo rakaab ah, hoos ayuu udhacay 35.4 boqolkiiba sanadka.